Marc-Vivien Foé Loka 2020: Nizeriana Victor Osimhen nifidy mpilalao afrikanina tamin'ny taona Ligue 1 - TELES RELAY
Marc-Vivien Foé Loka 2020: Nizeriana Victor Osimhen nifidy mpilalao afrikanina tamin'ny taona Ligue 1
SPORTOLONA SY FAHAFAHANA
Tamin'ny fiafaran'ny fanatanjahan-tena nesorin'ny krizy ara-pahasalamana nifamatotra tamin'ny Covid-19, ny fampisehoana an'i Lille Victor Osimhen dia tsy namela toerana hampiatoana. Ny mpikatroka Nizeriana dia nahazo ny andiany faha-2020 an'ny Marc-Vivien Foé Prize, nomena ny mpilalao afrikanina tsara indrindra any Ligue 1 amin'ny vanim-potoana.
Fanoherana ny fanavakavaham-bolonkoditra: lahateny fahitana an'ny Malcolm X any Afrika
Etiopia: maherin'ny 160 ny olona maty tamin'ny fihetsiketsehana ary ...
Enin-taona taorian'ny nahatongavan'i Marc-Vivien Foé Prize dia tsy tonga tany Nizeria. Toy ny tamin'ny 2014, rehefa nahazo ny satroboninahitra voalohany ny vazaha Lille Vincent Enyeama, ho an'ny ekipa Super Eagle hafa amin'ny club avaratra izay homena ny tropy natokana ho an'ny mpilalao afrikanina tsara indrindra amin'ny vanim-potoana any Ligue 1.
Tamin'ny fiafaran'ny vanim-potoana nahomby, na dia teo aza ny fanelingelenana noho ny Covid-19 (tanjona 13, 4 no nanampy), dia nandroso tsy nisy toerana hisalasalana ny fihoaram-pefy nataon'i Victor, Alex Osimhen. Tamin'ny 21 izy dia nahazo ny fanavahana azy manokana voalohany (284 pts), mialoha ny Alzeriana avy amin'ny AS Monaco Islam Slimani (95 pts) ary ny Maraokana avy amin'i Stade de Reims Yunis Albelhamid (89 pts).
Ny Nizeriana faharoa dia nomena satroboninahitra ho mpilalao afrikanina tamin'ny taona L1, izy koa dia mpilalao fahenina avy any Lille haka ity trofiara ity, nanamafy bebe kokoa ny fahaizan'ilay klioba avaratra amin'ny resaka fakana vato any Afrika. Satria raha tany Belzika, avaratra kely kokoa, i Lille dia nandeha nitady ny nugget azy, ny andalana voalohany amin'ny tantaram-piainan'i Victor Osimhen dia nosoratana lavitra any atsimo.
Benjamina, zanakalahy iray amin'ny zanakalahy fito, eo am-pototr'i Olusosun, ny fako lehibe Lagos, izay nihalehibe ny mpanafika avy ao Losc. Tamin'izy mbola kely dia niaraka tamin'ny reniny izy teo afovoan'ny ora fifamoivoizana tsy manam-petra mba hivarotan'ny rano vitsivitsy gony sy hahazoana sakafo.
Avy amin'ny galley ao Lagos ka hatrany amin'ny fanarahan-dia an'izao tontolo izao
Ny fiainana andavanandro sarotra izay mihasarotra kokoa, taona vitsy taty aoriana, tamin'ny fahafatesan'ny reniny. Tao anatin'izany dia nesorina tamin'ny asany ny rainy. Amin'ny alalàn'ny mpilalao ihany, tsy manan-tsafidy ilay fianakaviana ary tsy maintsy "mifikitra" mba hialana amin'izany. Andrew, zandriny lahimatoa, dia liana amin'ny baolina kitra ihany koa, manisy tsipika ny filàzan'ny asany handeha hivarotra gazety. Nefa iverenan'i Victor ao ambadiky ny sainy io tanjona io, na dia mandany ny ankamaroan'ny fotoanany aza izy.
Taona vitsivitsy taty aoriana, dia nandiso fotoana lehibe ny tantarany. Sahala amin'ny tanora an'arivony amin'izao fotoana izao, ny tovolahy dia iharam-pitsapana raha toa ka manantena i Nizeria mba hameno ny isa miaraka amin'ireo olom-pirenena voafantina ao aminy. Emmanuel Amunike, angano baolina kitra Nizeriana ary mpanazatra an'ny Super Eagles, manam-pahaizana voalohany, dia mamela ny tenany handresy lahatra ny talenta ananan'ity tovolahy ity ary nanapa-kevitra ny haka azy izy hifaninana amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika ho an'ny sokajy sokajy azy.
Ny CAN-2015 U17 (U17), hetsika fananganana ho an'i Victor Osimhen, satria efa in-efatra no nahazoany ary nahavita mpiady ambony amin'ny fifaninanana. Raha ny lojika dia nanohy ny fitsangatsanganana niaraka tamin'i Amunike izy ary nifaninana tamin'ny U17 World Cup. Tanjona folo taty aoriana - firaketana iray - Osimhen hanakona tanora Nizeriana eran-tany. Ary ny prodigy dia misarika ny saina any amin'ny zorony efatra eto Eropa.
Alemaina eo am-pototry ny rindrina, avy eo dia nivadika Belgian
Tamin'ny farany, i Wolfsburg izay namely ny jackpot tamin'ny alàlan'ny sonia ny mponina ao amin'ny Akademia farany Ultimate Strikers, tamin'ny fiandohan'ny taona 2017, taorian'ny nananganana ny fifanarahana mialoha ny taona 2016. Raha ny siansa no farafaharatsiny, hatramin'ny nisian'ny olana miangavy ho an'ny tanora mpitrosa. Voafandriky ny ratra ary ny fampifanarahana sarotra any Aleman, dia tsy mahavita manery ny tenany izy, na mahazo mahazo fotoana filalaovana lehibe (am-polo ambin'ny folo faran'ny lalao).
Ary tamin'ny fahavaratry ny taona 2018, rehefa niverina teto an-tanindrazana izy mba hijery ny fianakaviany, dia voan'ny tazomoka talohan'ny niverenany tany Allemagne. Tsy misy fiomanana amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana ho an'ny zazalahy nugget tanora, voatery hitazomana fizahana mpitsabo iray any Wolfsburg.
Ho an'ny mpitondra Alemanina dia toa tsy misalasala intsony ny tsy fahombiazana. Natolotry ny klioba belgianina marobe, noho izany dia tonga tany Charleroi i Osimhen, tsy matoky tena sy tsy manam-paharoa. Toetra mampidi-doza ny fandidiana rehetra. Fa tao anatin'ny telo herinandro fotsiny dia nahavita nanova ilay fironana ny mpilalao farany. Raha ny lalao voalohany an'ny Jupiler League dia nipoitra ny mazava: ny club belgian dia namofona ny vintana tsara.
Osimhen vetivety dia nanody ny ankamaroan'ny toe-batany ary, nanomboka tamin'ny volana septambra, nandresy tamin'ny 11 taona izy mba tsy handao azy mihitsy. Ny firaketany dia mahatonga azy ho iray amin'ny zavakanto fanta-daza indrindra amin'ny fiadiana ny ho tompondakanany, ary misy tanjona 19 no hita tamin'ny vanim-potoana 2018/19.
Mahagaga fa ny safidy amin'ny fividianana dia nofidinin'i Charleroi rehefa nampindrana ilay mpilalao dia namboarina tamin'ny fahavaratra manaraka. Ny klioba belzianina dia mandoa ny vola 3,5 tapitrisa euros nangatahin'i Wolfsburg ary avy eo namidy ny mpilalao tany Lille, ho takalon'ny vola XNUMX Euros.
Lille sy ny Pépé teo aloha
Amin'ny lafiny Losc, tsotra ny tanjona: hikaroka fanoloana an'i Nicolas Pépé - Prix Marc-Vivien Foé 2019 - izay tanjona 22 tamin'ny vanim-potoana 2018/19 dia nahafahan'ny klioba hitady toerana faha-2 ao Ligue 1 Niorina na aiza na aiza tany Eropa, nandao ny avaratra avaratr'i Frantsa ny Ivoariana, tsy nahagaga fa mitarika an'i Arsenal ary mitentina 80 tapitrisa Euros eo ho eo.
Ny hitsoka ara-bola tsara dia tsy azo lavina, fa ny fahavoazana ara-panatanjahantena dia manome toky fa sarotra ny manonitra. Ary na izany aza ... Avy amin'ny lalao voalohany nataony, tamin'i FC Nantes, Osimhen dia nanao sonia in-droa ho an'ny fanokafana ny Ligue 1. Avy eo nanohitra an'i Saint-Etienne, roa andro taty aoriana, ny vidiny ihany. Mikotroka ny fiantombohana, ary ny takelaka mifandanja amin'ny faran'ny vanim-potoana, na dia tratry ny krizy ara-pahasalamana mifandray amin'ny Covid-19 aza, dia manamafy ny fironana (tanjona 13 ary 4 manampy amin'ny lalao 27).
Resy lahatra amin'ny bozaka dia tokana ihany koa ny mpilalao any ivelany. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i La Voix du Nord, ilay dokotera Losc teo aloha, Patrick Flamant, dia mivoatra ohatra ny zazalahy iray "tena tapa-kevitra" ary "mitoetra lalandava". "Toa tsy misy afa-tsy ny baolina misy eo akaikin'ny varavarana," hoy izy. Io firehetam-po io dia toa nandresy ny mpanohana an'i Lille, izay nifidy azy "Mastiff of the season", ny 2 jona teo. «Malalà» »ny vahoaka izay, na dia malahelo ny fahafatesan-drainy andro vitsy talohan’izay, dia efa tsy nahavita nanamafy indray ny fitiavany ny fikambanana.
Avy aiza no ahafahana manamarina fa i Osimhen dia mety ho kandida amin'ny safidiny amin'ny ho avy? Tsy tena azo antoka fa satria ny tolotra dia mitsangantsangana eo amin'ny latabatry ny mpitarika Lille. Naples, Liverpool, ary anarana lehibe hafa amin'ny baolina kitra eropeana dia toa vonona ny hamotika ny banky piggà azy ireo - eo anelanelan'ny 40 ka hatramin'ny 80 tapitrisa euros - mba hividianana ny serivisy Nizeriana. Tamin'ny alàlan'ny fanekena ny filohan'i Losc, dia ho avy amin'ny "tompon-daka telo samy hafa" ireo "kandidà" samihafa. Ary tsy isalasalana fa tahaka ny tamin'ny herintaona niaraka tamin'i Nicolas Pépé, i Lille dia ho sahirana amin'ny fandavana izany tolotra tena lehibe izany.
• Ny fanisana feno ny Prix Marc-Vivien Foé 2020:
1 - Victor Osimhen (Nizeria - Lille OSC) ► 284 pts
3 - Yunis Abdelhamid (Marôka - Stade de Reims) ► 89 pts
4 - Habib Diallo (Senegaly - FC Metz) ► 52 pts
5 - Mbaye Niang (Senegaly - Stade Rennais) ► 43 pts
ary Idrissa Gueye (Senegal - Paris SG) ► 37 pts
9 - Edouard Mendy (Senegaly - Stade Rennais) ► 24 pts
11 - Moses Simon (Nizeria - FC Nantes) ► 10 pts
Chinde 76 Lahatsoratra 0 hevitra
Ny fomba hiomanana amin'ny Far Avaratra amin'ny vanim-potoana aorian'ny Biya
Fivoriambe momba ny toetrandro: Frantsa dia nampanantena 15 lavitrisa euros ho an'ny “fiovam-po tontolo iainana”